အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ပိုလျှံမှုရှိသည့် သကြား၊ဆန်နှင့်ပြောင်းတို့မှ အီသနောလောင်စာထုတ်လုပ်မည် | Commerce Journal
Home » -ပြည်ပရှိမြန်မာသံရုံးများမှပေးပို့သောသတင်းများ » အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ပိုလျှံမှုရှိသည့် သကြား၊ဆန်နှင့်ပြောင်းတို့မှ အီသနောလောင်စာထုတ်လုပ်မည် » အထွေထွေ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ပိုလျှံမှုရှိသည့် သကြား၊ဆန်နှင့်ပြောင်းတို့မှ အီသနောလောင်စာထုတ်လုပ်မည်
Tue, 10/12/2021 - 13:08 -- journal_editor
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်းကြံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမှ ပိုလျှံသည့်ပမာဏအား အီသနောလောင်စာဆီအဖြစ် ထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင် ၂၀၂၅ ခုနှစ်၌ ဓာတ်ဆီတွင်၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရောနှောအသုံးပြုရန်ရည်မှန်းချက်ချမှတ်ထားမှုကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးအတွက် ဆန်နှင့်ပြောင်းတို့ ကဲ့သို့သော ကောက်ပဲသီးနှံများ ထုတ်လုပ်မှုမှ ပိုလျှံမည့်ပမာဏကိုလည်း အီသနောအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၁-၁၀-၂၀၂၁ နေ့၌ အိန္ဒိယသကြားစက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက ကျင်းပသည့် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်တွင် အိန္ဒိယစားသုံးသူရေးရာ၊ စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ပြည်သူ့ဖြန့်ဖြူးမှုရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ အတွင်းဝန် Mr. Sudhanshu Pandey က ပြည်တွင်း၌ သကြားထုတ်လုပ်မှုမှာ နှစ်စဉ် တန်ချိန် သန်း ၃၂ ကျော်ရှိကြောင်း၊ ပြည်တွင်းသုံးစွဲမှုမှာ တန်ချိန် ၂၆ သန်းခန့်ဖြစ်ရာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ကာလများတွင် သကြားတန်ချိန် ၄ သန်းမှ ၄.၅ သန်းအထိ ပိုလျှံမှုရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ ပိုလျှံစွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းက ပြည်တွင်း၌ သကြားဈေးနှုန်းနိမ့်ကျမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့် တောင်သူများနှင့် ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်သည့် သကြားစက်ရုံလုပ်ငန်းများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ စက်ရုံထွက်သကြားဈေးနှုန်းများ နည်းပါးမှုမှ ဖိအားများဖြစ်ပေါ်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရသည် မူဝါဒဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ရပ်အဖြစ် သကြားများ ပြည်ပတင်ပို့ရာတွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထောက်ပံ့မှုနှင့် အီသနောတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်မှုတို့ကို တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုနှစ်၌ သကြားတန်ချိန် ၃.၅ သန်းခန့်ကို လောင်စာအဖြစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှေ့လာမည့်နှစ်တွင် သကြားတန်ချိန် ၆ သန်းခန့်အား အီသနောထုတ်လုပ်မှုသို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ဈေးကွက်အတွင်းမှ ပိုလျှံမှုကို လျော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိကာလတွင် ဓာတ်ဆီ၌လောင်စာအဖြစ် ၁၀% ပါဝင်ရောနှောနိုင်ရေးအတွက် အီသနောထုတ်လုပ်မှုကို ခွင့်ပြုထားပြီး ၂၀၂၄ ခုနှစ်မှစတင်၍ ၂၀% အထိ ရောနှောရန် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ယခုအခါ ပြည်တွင်းကောက်ပဲသီးနှံထုတ်လုပ်မှုမှာ ပိုလျှံသည့် ဆန်နှင့်ပြောင်း တန်ချိန် ၁၆.၅ သန်းခန့်ကိုလည်း အီသနောထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရလက်ဝယ်၌ ‌ကောက်ပဲသီးနှံအရန်ဝယ်ယူထားရှိမှုမှာတန်ချိန် သန်း ၉၀ ခန့်ရှိပြီး ၎င်းပမာဏသည် ပြည်တွင်းဈေးကွက်ဈေးနှုန်းများအပေါ် ဝန်ပိစေဟန်ရှိသော်လည်း Covid-19 ကပ်ရောဂါကာလ အတွင်း သီးနှံတန်ချိန် သန်း ၆၀ ခန့်အား ပြည်သူသန်း ၈၀၀ ထံသို့ စရိတ်သက်သာစွာဖြင့် ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ကြံစိုက်ပျိုးလျက် သကြားထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသည့် ဈေးကွက်ရာသီကာလမှာ အောက်တိုဘာလမှ နောက် ၁ နှစ် စက်တင်ဘာလအထိဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သော ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဈေးကွက်ရာသီအတွင်း ပိုလျှံမှုရှိသည့် သကြားတန်ချိန် ၂ သန်းခန့်ကို အီသနောလောင်စာအဖြစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့ကြောင်း၊ ယခုနှစ် ဇွန်လတွင် အိန္ဒိယအစိုးရသည် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်သော အိန္ဒိယစားသောက်ကုန်ကော်ပိုရေးရှင်းထံမှ ဆန်တန်ချိန် ၇၈၀၀၀ ကို အီသနောအဖြစ် ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ၁ ကီလိုလျှင် ရူပီး ၂၀ ထောက်ပံ့ဈေးနှုန်းဖြင့် နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ ရောင်းချခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုကဲ့သို့ ကြံနှင့်ကောက်ပဲသီးနှံများအား အီသနောလောင်စာဆီအဖြစ် ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် ရူပီးငွေ ကုဋေ ၄၁၀၀၀ အထိ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်အကိုင်သစ်များဖန်တီးနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကာဘွန်မိုနော့ဆိုက် ထွက်ရှိမှုအား ၃၀ မှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ထုတ်လွှတ်မှုအား ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ကျစေလျက် လေထုသန့်ရှင်းမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပြည်ပမှရေနံ ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းရာ၌ ရူပီးငွေ ကုဋေ ၃၀၀၀၀ အထိ သက်သာမှုရရှိစေမည်ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယစားသုံးသူရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ‌ဖော်ပြပါသည်။
Source: 1. Nearly 17 mn tonnes of surplus foodgrains to be used for ethanol making, 1-10-2021, Economic Times
2. Centre doubles incentive on sugar sacrificed for producing ethanol from October 2021, 1-10-2021, Press Information Bureau of India